Su'aal: Maxaa keeno naaso xanuunka xiliga caadada?
Author Topic: Su'aal: Maxaa keeno naaso xanuunka xiliga caadada? (Read 33764 times)
« on: February 20, 2016, 07:59:47 AM »
asc waraxmah akhwani waxan idin waydiyay.maxa keeno naaso xanuunka xiliga caadadu so dhowdahay ama ay joogtaba??
Re: Su'aal: Maxaa keeno naaso xanuunka xiliga caadada?
« Reply #1 on: February 25, 2016, 08:48:00 PM »
Naasaha oo xanuun laga dareemo xilliga caadada waa cabasho ku badan dumarka, naaso xanuunka wuxuu ka mid yahay waxyaabo badan oo la dareemo xilliga caadada.
Waxay haweenka qaar ka dareemaan naasahood xilliga caadada ka horrayso kuus wayn oo daqnasho leh oo naasahooda aysan horay ugu ogayn, tanoo loo yaqaano "Fibrocystic breast disease", waa wax aan kansar ahayn, markii caadada laga gudbane way shuuqaan oo way dhamaadaan.
Badanaa xanuunka la dareemo iyo daqnashada wax intaa dhaafsiisan ma jiraan markii dhiiga caadada yimaadane xanuunka wuu yaraadaa.
Maxaa keeno naaso bararka iyo daqnashada xilliga caadada?
Waxaa arrintaan loo saariyaa isbadallada hormoonka ku dhaco dumarka xilliga caadada soo dhawdahay, sida dabiiciga ah, hormoonka estrogen aad ayuu u kacaa kadibna si dhakhso ah ayuu ku dagaa, taas ayaa keenaysa in naasuhu bararaan, hormoonka kale ee progesterone isagane wuxuu barariyaa qanjirrada soo daayo caanaha, labadaan isbadal waxaa la dareemaa in naasuhu ku daqnadaan khaasatan markii la taabto ama wax kaa taabtaan si kadis ah.
Naasaha waxay kaloo u ekaadaan wax buuxo oo kale oo xoogaa culeys ayaa laga dareemaa, dareenkaan naasaha laga dareemo wuu sii yaraadaa kullamaa ay haweentu da' noqoto, maadaama hormoonka istarojiinka uu hoos u dhaco.
Sidee loola tacaalaa arrintaan?
Arrintaan ma ahan wax dhib keeni karo, waana wax ka dhashay isbadal dabiici ah oo qofka ilaahay ku abuuray, haddii aad isku aragtid astaamahaan soo socdo, markaas la xiriir dhakhtar:
Kuus cusub oo naaska ka soo baxo oo aanan caadada la tagaynin
Dheecaan ama qoyaan ka yimaado ibta naaska.
Naaso xanuun aad ka hurdi la'dahay ama saamayn ku yeeshay nolol maalmeedkaaga.
Kuus hal naas ka soo baxay oo aan xiriir la lahay caadada
Hadduu xanuunka aad kuugu daran yahay, waxaad isticmaali kartaa paracetamol ama ibuprofen oo xanuun baab'iye ah.
Waxaa la ogaaday in cunnooyinka uu ku badan yahay fitamiin E-ga inuu yareeyo daqnashada naasaha iyo bararkooda, waxaana cunnooyinkaas ka mid ah:
Saytuunka iyo saliiddiisa
Akhriso lug xanuunka xilliga caadada: http://somalidoc.com/smf/index.php/topic,6427.0.html
Akhriso buruq naaseedka: http://somalidoc.com/smf/index.php/topic,2224.0.html
Akhriso Kansarka Naasaha: http://somalidoc.com/smf/index.php/topic,1617.0.html
Akhriso cillada bararka naasaha ragga: http://somalidoc.com/smf/index.php/topic,5855.0.html
Akhriso Naasaha kala dheer: http://somalidoc.com/smf/index.php/topic,3304.0.html
Akhriso Xanuunka iyo dildillaaca ibta naasaha: http://somalidoc.com/smf/index.php/topic,1438.0.html
Haddii aad su'aalo caafimaad ah qabtid iigu soo dir qeybta su'aalaha: Akhriso Xanuunka iyo dildillaaca ibta naasaha: http://somalidoc.com/smf/index.php/board,31.0.html
Views: 12349 July 02, 2017, 11:30:43 AM
Views: 57573 January 06, 2015, 08:30:19 PM
Views: 22190 April 06, 2016, 04:35:38 PM
Views: 9796 June 11, 2017, 12:22:58 PM
Views: 16181 March 10, 2012, 02:33:13 PM